Arbaco 11 Bisha Sideedaad 2021
Watch 'The ring Watch' waxay ka dhigan tahay fududeynta ugu badan ee wristwatch dhaqameedka iyadoo la tirtirayo tirooyinka iyo gacmaha iyadoo la door bidaayo labada farac. Qaabkan qaab dhismeed ee ugu yar ayaa bixiya labadaba muuqaal nadiif ah oo sahlan oo si fiican u guursanaya dareenka indhaha ee qabsanaya. Waa taajkii saxeexa wali wuxuu bixiyaa qaab wax ku ool ah oo loogu beddelo saacadda halka shaashadda qarsoon ee e-ink ay muujineyso shaashadda midabka muuqda oo leh qeexitaan gaar ah, ugu dambeyntiina sii wadata analog analog ah iyadoo sidoo kale la siinayo cimri dheeri batari.
Talaado 10 Bisha Sideedaad 2021
Jijimadu Waxaa jira noocyo badan oo kala geddisan oo bir ah iyo bir-gacmeedyo: naqshadeeyayaal, dahab, caag, qaali ah iyo qaali ah… laakiin qurux badan sida ay yihiin, dhammaantood had iyo goor waa sahlan yihiin oo kaliya dugaagado. Fred waa wax intaas ka sii badan. Cuffs-yada fudfuddooda waxay dib u soo nooleeyaan kuwii hore magacyadoodii, weli waa casri. Waxaa lagu gashan karaa gacmo qaawan iyo sidoo kale dusha silk ama funaanad madow, oo had iyo jeer waxay ku dari doonaan taabasho fasalka ah qofka xiran. Guruubyadani waa kuwo gaar ah maxaa yeelay waxay u yimaadaan sidii lammaan. Iyagu waa kuwo aad u fudud oo ka dhigaya xirashada iyaga wax cabsi ah. Markaad xidhato, mid ayaa si qumman loo dareemi doonaa!
Silsilad Qoorta Iyo Xareysku
Isniin 9 Bisha Sideedaad 2021
Silsilad Qoorta Iyo Xareysku Naqshadeynta waxaa dhiirrigeliyay falsafadda 'Neoplatonic of macrocosm iyo microcosm', iyadoo la arko qaabab isku mid ah oo dib loo soo saaray dhammaan heerarkii cosmos-yada. Iyaga oo tixraacaya saamiga dahabiga ah iyo isku xigxiga fibonacci, qoorta ayaa leh qaab xisaabeed oo la jaanqaadaya qaababka loo yaqaan 'phyllotaxis' ee lagu arko dabeecadda, sida lagu arkay ubaxa qoraxda, miraha, iyo dhir kale duwan. Guruubka dahabiga ah wuxuu matalaa Caalamka, oo kuxiran dharka waqtiga firaaqada ah. "Anigu waxaan ahay" hydrogen "isku mar waxay matalaysaa moodal ah" Nooca Guud ee Naqshadeynta "iyo moodel Caalamka ah lafteeda.
Axad 8 Bisha Sideedaad 2021
Dahabka Dib Qurux, quruxsan, dahab qurxis leh, oo loogu talagalay baahi loo qabo in la isticmaalo sheyga qashinka ee soosaarka Claire de Lune Chandelier. Khadkani wuxuu u noqday tiro aad u tiro badan oo uruurinta - dhammaan sheekooyinka sheekaynaya, dhammaantood waxay matalaan shakhsiyaad aad u qurux badan oo ku saabsan falsafadaha naqshadeeye. Muuqaal Marka laga reebo muraayadda acrylic loo isticmaalo, taas oo lafteeda ka tarjumaysa iftiinka, maaddadu had iyo jeer waa mid muuqda, midab ama cad. Baakadaha CD-ga waxay xoojinayaan fikradaha soo-celinta.
Sabti 7 Bisha Sideedaad 2021
Giraantu Dhagaxa quruxda badan - pyrope - nuxurkiisu aad ayuu u wanaagsan yahay iyo sharaf weyn. Taasi waa quruxda iyo midnimada dhagaxa lagu garto muuqaalka, kaas oo loogu talagalay qurxinta mustaqbalka. Waxaa loo baahday in la abuuro qaab u gaar ah dhagax, kaas oo isaga geyn doona hawada. Dhagaxa waxaa loo jiiday meel bir ka badan birta haysata. Qaaciddadaani waa mid dareen xasaasi ah iyo xoog soo jiidasho leh. Waxay ahayd muhiim in la ilaaliyo fikradda qadiimiga ah, iyadoo la taageerayo aragtida casriga ah ee dahabka.
Jimco 6 Bisha Sideedaad 2021
Brooch Muuqaalka dahabkaani waa halkaan loo adeegsaday qaab dhismeedka dhagxaanta weyn leh oo qarka u saaran. Muuqaalka Naqshadaynta Jewelry wuxuu furaa kaliya dhagxaanta qarinaya tikniyoolajiyadda kulanka. Dhagaxa laftiisa waxaa qabanaya laba, xirxirasho aan kala go 'lahayn iyo saxan dhuuban oo dheeman. Saxankaani waa aasaaska dhamaan isku xirnaanta qaab dhismeedka. Waxay haysaa iyo dhagaxii labaad. Halabuurka oo dhan ayaa suurtogal ka dib markii la sharraxay dhagax weyn oo lagu shiidi karo.
Prisma Qalabka Curyaameysan Ee La Qaadi Karo Ee Ultrasonic Arbaco 22 Bisha Sagaalaad
Baan Armaajo Qado Loo Sameeyay Talaado 21 Bisha Sagaalaad
LOTUS Qolka Musqusha Isniin 20 Bisha Sagaalaad
Watch Jijimadu Silsilad Qoorta Iyo Xareysku Dahabka Dib Giraantu Brooch